iBus bụ unofficial ngwá ọrụ iji weghachi Apple Watch [vidiyo] | Esi m mac
Ụlọ Ignatius | | Apple Watch, Noticias
Kemgbe mmalite ya, ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịma mgbe Apple bidoro eriri nke ga-eme ka anyị jikọọ Apple Watch na Mac ma si otú a nwee ike iweghachi ya ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu na beta ma ọ bụ naanị idetuo egwu ozugbo na-enweghị inwe ịgafe Wi-Fi obi ụtọ ma ọ bụ njikọ Bluetooth dị nwayọ nwayọ. Apple n'oge ahụ naanị ihe ngwọta ọ na - enye ndị nrụpụta (Apple Watch betas adịghị na mmemme beta ọha) ma ọ bụrụ na inwe nsogbu na beta bụ gaa na Storelọ Ahịa Apple ebe ị nwere ike weghachite ngwaọrụ ahụ. Mana nke ahụ yiri ka ọ gafeela.
iBus bụ ngwa ọrụ na-enye anyị ohere ijikọ Apple Watch anyị, n'agbanyeghị ụdị ya, na iTunes. MFC, onye kere ya, kwuru na bụ ngwa ọrụ izizi dị n’ahịa na onye ọrụ ya na-egosi anyị na vidiyo dị n'elu, ebe ọ na-egosi anyị otu esi jikọọ Apple Watch na ngwaọrụ anyị nwere ike weghachite ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nzọụkwụ mbụ iji nwee ike iweghachite ngwaọrụ ahụ bụ itinye ya na ọnọdụ DFU, usoro yiri nke anyị na-eme itinye iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch na ọnọdụ a.
Tinye Apple Watch na ọnọdụ DFU
Maka nke a, anyị ga-pịa ma pịa ma jide okpueze dijitalụ na akụkụ bọtịnụ maka 10 sekọnd. Mgbe 10 sekọnd anyị ga-ahapụrịrị bọtịnụ n'akụkụ mana gaa n'ihu na-ejide bọtịnụ okpueze. Ozugbo apụl pụtara na Apple Watch, anyị ga-ejikọ eriri iBus na Apple Watch, jikọọ ya na eriri ọkụ ọ bụla ma jikọọ ya na Mac anyị. ITunes ga-amata Apple Watch na ọnọdụ DFU na-akpaghị aka ma nye anyị ohere ịhọrọ ụdị ahụ. nke watchOS anyi choro ịwụnye, mbipute nke anyi aghaghi ibudata na mbu.
ọnụahịa iBus bụ $ 100 maka ụdị mbụ na Apple Watch Series 1. Ọ bụ ezie na eriri iBus maka Apple Watch Series 2 dị ọnụ ahịa na $ 120. Anyị nwere ike ịchọta eriri abụọ ozugbo na weebụsaịtị MFC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » iBus bụ unofficial ngwá ọrụ iji weghachi Apple Watch [vidiyo]
Ma ọ bụrụ na ị nwere apple ngosi ngosi version ma ọ bụ na icloud, ọ na-eweghachi na ọ na-eweghachiri enweghị akaụntụ na dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe?